Ogaanshaha waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo: Dolphin vs Windows Explorer | Laga soo bilaabo Linux
Ku soo dhowow maqaalka koowaad ee taxanaha: Ogaanshaha waxyaabaha beddeli kara. Qodobka aan doonayo inaan ku helo maqaalka noocan ahi waa inaan taas ku muujiyo GNU / Linux iyo codsiyada ay leedahay waxaan ku sameyn karnaa isla sida aan ku sameyn karno Microsoft Windows Waxaan hayaa xitaa wax yar.
Tan waxaan ku bilaabayaa isbarbardhiga arjiga guud ahaan loo isticmaalo kan ugu badan Nidaamka hawlgalka: Maamulaha Faylka ama Baadhe.
Noocyada noocan ah ee maqaallada ah, marwalba waxaan u isticmaali doonaa codsiyada iyo xulashooyinka ay heli karaan markii ugu horreysa. Taasi waa sababta codsiyada dhinac saddexaad looga tago muddo yar
1 Isdhexgalka iyo Muuqaalka
5 Ma jiraan waxyaabo kale oo lagu beddelan karo?
Isdhexgalka iyo Muuqaalka
Waa inaan caddeeyaa inaanan ahayn naqshadeeye dhexdhexaad ah, oo ka fog. Faa'iidooyinka ama faa'iido darrooyinka aan tilmaami karo marka la eego isku habeynta canaasiirta mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan, waxay ku saleysnaan doontaa shuruudaha iyo dhadhanka shakhsiga ah.
Sida ay dad badani ogyihiin, isbeddelka qaabeynta naqshadeynta ayaa ku socota habka loo abuurayo iswaafajinta codsiyada, si loogu isticmaali karo kombuyuutarka iyo aaladaha taabashada labadaba.
Isbeddelkan waxaa si cad looga dhex arki karaa file (magaca aad qaadatay Windows Explorer en Windows 8), oo isbadal yar lagu sameeyay marka loo eego noocii hore. Laakiin xaqiiqda ah in codsiyada la sameeyay wax yar, macnaheedu ma aha in hawlgalkoodu ka duwan yahay.
Si aad fikrad uga hesho waxa aan isbarbar dhigayo, waxaan ku tusayaa sida ay u muuqdaan qaab ahaan hoomboro en KDE 4.9 y Windows Explorer en Windows 7 siday u kala horreeyaan:
Faylka (Windows Explorer)
Sida aad u aragto, labaduba waxay leeyihiin waxyaabo aad u la mid ah qaabkooda, dabcan, waxay ka caawisaa dadka isticmaala wax badan inay helaan isku ekaansho marka ay la shaqeynayaan labada codsi.
Dabcan, waxaa jira kala duwanaansho gaar ah oo kuxiran khibrada ay horumariyayaashu rabaan inay siiyaan adeegsadaha. Laakiin aan fiirino faahfaahinta qaar marka hore.
hoomboro Waxay ka kooban tahay qaab dhismeedka soo socda:
1.- Badhamada Dhabarka / Hore.
Sida caadada u ah arjiga noocan ah ama biraawsarayaasha, iyagu waa badhannada noo oggolaanaya inaan horay u soconno ama gadaal u soconno, innagoo awood u leenahay inaan dhex mushaaxno galkayaga.
2.- Badhamada noocyada aragtida galka
Badhannadani waa kuwa noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno sida faylku u soo muuqanayo: Muuqaalka Icon, Muuqaalka is haysta o Aragti faahfaahsan.
3.- Badhanka raadinta.
Badhankaani wuxuu soo bandhigayaa bar qoraal ah oo aan ku dhejineyno raadinta isku dhafan ee faylasha ama faylalka gudaha hoomboro.
4.- Eeg thumbnails.
Sida caadiga ah, thumbnails ee sawirrada lama muujinayo, taas oo u oggolaanaysa marin dhakhso leh fayl ay ku jiraan kumanaan sawir ah. Dabeecaddan dabcan waa la beddeli karaa.
5.- U qaybi Dolphin laba koronto.
Marka jeedalku aanu ku filnayn, hoomboro Waxay awood u leedahay inay soo bandhigto guddi dheeri ah, taas oo noo oggolaaneysa inaan sifeyn ah oo dhaqso leh u maamulno faylalkayaga, innagoo awood u leh inaan u dhaqaaqno ama nuqul ka sameysano hal dhinac oo dhinaca kale ah iyadoo si fudud loo soo jiidayo.
6. - Badhan si loo habeeyo ama loo helo ikhtiyaariyada loo yaqaan 'Dolphin' oo dheeraad ah.
Sida waa macquul, hoomboro waxay leeyihiin ikhtiyaarro kale oo badan oo lagu gali karo ama lagu qaabeyn karo iyadoo la adeegsanayo badhan. Waxaan ka hadli doonaa fursadahaan dheeriga ah goor dambe markaan galno isbarbardhiga.
7.- Burcadka rootiga (Jajabka, raad).
Meesha bar ama Breadcumb, halkaas oo aan ugu dhex mari karno qaab badhano ah, oo loo maro faylalka gadaal ama gadaal, ama halka aan si toos ah ugu qori karno wadada galka aan dooneyno inaan marinno.
8.- Qaybta aan ku arki karno faylalkayaga adoo adeegsanaya tabs ama guddi dheeri ah.
Aaggan waxaa loo qaybin karaa tab ama gudi dheeri ah sidaan kor ku sharaxay.
9.- Faahfaahinta macluumaadka iyo faylka.
Markaad dooranaysid feyl, waxaan kuheleynaa qeybtaan horudhac iyo sidoo kale macluumaad kala duwan iyo faahfaahin.
10.- Xulleeye cabbir u ah thumbnails, fayl iyo astaamaha guud ahaan.
Xuliyahaan waxaan si fudud ugu kordhin karnaa kuna yareyn karnaa cabirka feylasha, thumbnails iyo dhamaan feylasha laga helo qeybta 8.
11.- Faahfaahinta feylka la xulay.
Qaybtani waxay muujineysaa faahfaahinta hordhaca ah ee feylka la xulay.
12.- Dhinac dhinacyadiisa ah halka cunsuriyadiisu u qaybsan yihiin qaybo ama qaybo.
Iyadoo nooca 4.9 ee KDE, hoomboro waxaa ku dhacay isbedello muuqaal ah oo hagaajiyay waxqabadka iyo guud ahaan arjiga, helitaanka abaabul iyo kordhinta wax soo saarka isticmaalaha.
Waxay fuliyaan isla hawshii aan ku aragnay hoomboro.
2.- Burcadka rootiga
Waa habka kaliya ee ay tahay inaan kor ugu qaadno hal heer (dib ugu laabo galka hore) Windows Explorer, ka dib waan sharxayaa sababta.
Qaybta faylashayada iyo faylkeena lagu muujiyo.
Mashiinka baaritaanka waxaa lagu muujiyaa asal ahaan (maahan sida ay ku dhacdo Dolphin) taas oo noo oggolaaneysa inaan si dhakhso leh u baarno, taas oo naga badbaadinaysa tallaabo.
5.- Faylka iyo xulashada aragtida galka.
Aaggan waxaan ka dooran karnaa qaabka feylashayada iyo faylkeena lagu arki doono waxaanna heysanaa ikhtiyaar aan ku qarino gudida saxda ah oo leh muuqaalka.
Sida ku jirta hoomboro Gudigani wuxuu muujinayaa muuqaalka hore ee feylka aan dooranay, wuxuu kaloo noo ogolaanayaa inaan ciyaarno feylasha maqalka iyo muuqaalka
7.- Faahfaahinta faylka ama galka.
8.- Dhinac dhinac ah.
U qaybi qaybo sida la mid ah hoomboro.
9.- Fursadaha Explorer.
Baarkani wuxuu na siinayaa suurtagalnimada in lagu kala doorto xulashooyinka qaar Explorer, marka lagu daro, waxay awood u leedahay inay na siiso xulashooyin dheeri ah sida ku xusan feylka aan ku shaqeyn karno.
Ilaa hadda waxaan si faahfaahsan u qeexnay qayb kasta oo ka mid ah labada codsi. Hadda, waxaan arki doonnaa faa iidooyinka iyo qasaaraha uu mid walba innagu siinayo hadba sida ay u kala mudan yihiin.
Waxa kor lagu muujiyey maahan wax ka badan labada codsi maadaama ay ku yimaadaan qaab ahaan. Taasi waa marka faa'iidooyinka hoomboro ku saabsan Windows Explorer, mahadsanid fursadaha dheeraadka ah.
Waxaa jira saddex faahfaahin oo ay ku jiraan Explorer ka faa’iideysto hoomboro, ama halkii, taas oo Explorer uu ku guuleysto +1:
1.- Lahaanshaha aragtida galka midaysan iyo cabirkooda.
Tani waa mid aad u raaxo badan oo aad wax ku ool ah, sababtoo ah si ka duwan hoomboro, waxaan haysannaa dhammaan xulashooyinka cabirrada iyo noocyada aragtida hal meel.
2.- Tus xulashooyin kala duwan sida ku xusan feylka aan isticmaaleyno ama galka aan ku jirno.
3.- Faahfaahinta hoose ee Explorer Iyagu waa guul sababtoo ah xaddiga macluumaadka ay bixiyaan iyo inaan sidoo kale wax ka beddeli karno.
Haddii kale, hoomboro kaliya ma aha wax la mid ah sida Explorer, laakiin way dhaaftay:
1.- Raadi baarka shaandhada.
Baarkani waa la hawlgelin karaa xulashooyinka hoomboro ama adeegsiga furaha isku dhafan Ctrl + I oo waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan ay tahay in, markii aan qoreyno shuruudaha raadinta, faylalka ama fayllada aan shuqul ku lahayn waxa aan qoreyno ay meesha ka baxayaan.
2.- Heerarka sare ee habeynta:
Windows Explorer Waxay noo xaddideysaa inaan wax ka beddelno waxyaabo badan oo ku saabsan qaabeynta qaybaha ay ka kooban tahay. Xaqiiqdii, ma haysato wax noo ogolaanaya inaan u qaabeyno sida aan jecel nahay, waa sababta aan ugu dari karin ama u saari karin wax kasta oo ka mid ah isku xirkeeda, sida:
- Ikhtiyaarrada lagu daro ama laga saaro badhamada:
Waxaan badhanka u isticmaalaa Dib / Hore inaan u dhaqaaqo inta u dhexeysa galka, laakiin sidoo kale, sidoo kale waxaan isticmaalaa mid aan ku imaanin qaab ahaan hoomboro, waana badhanka Arriba (in kor loo qaado hal heer).
Waxaan u maleynayaa in xaqiiqda ah in badhankani uusan u muuqan mid iska caadi ah waa inaan isticmaali karno Burcadka rootiga, oo isla sidaas ayey ku dhacdaa Explorer-ka. Farqiga ayaa ah hoomboro hadaad noo ogolaato inaan ku darno.
Intaas kaliya maahan. hoomboro waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan bedelno booska badhamada ku teedsan baarka, anagoo awoodi karna inaan bedelno amarka muuqaalka
- Ikhtiyaarrada lagu beddelayo booska canaasiirta (oo ay ku jiraan dhinaca dhinac).
Sidaan ku sheegay qodobkii hore, kaliya ma beddeli karno booska badhamada, laakiin sidoo kale wax kama beddeli karno dhinaca kooxda. Tusaale ahaan, aniga lafteyda waxaan u isticmaalaa dhanka midig maadaama ay aad iigu raaxeysan tahay inaan shaqeeyo.
Waxaan ku tusayaa sawir ah sida aan u qaabeeyey hoomboro:
Laakiin waxaan isticmaali karnaa noocyo kala duwan oo noocyo ah, tusaale ahaan:
Dolphin oo ay ku dhegan yihiin labada dhinac
Dolphin oo leh faashad la rogay
Dolphin oo leh toolbar xagga hoose
- Ikhtiyaar loo qaybiyo Dolphin tabs ama guddi dheeri ah.
Isticmaalka guddi dheeri ah ama tabs waxay si weyn u kordhineysaa wax soo saarkeenna iyo waqtigeenna, maxaa yeelay isla daaqadda ayaan ku maamuli karnaa feylasha ku jira fayllo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaan ka soo guurin karnaa feyl hal feyl illaa mid kale anagoo ku jiidaneyno tilmaamaha.
Waxaas oo dhan waxaan ku darnaa qaar adeegyada dheeraad ah waxay leedahay hoomboro waa lagu dari karaa ama la saari karaa, sida suurtagalnimada la shaqeynta bakhaarrada keydka Nidaamyada Xakamaynta Nooca sida SVN, Git, Mercurial ama Bazaar, iyo adeegyada kale.
Oo iska ilaali tan, kuma dhahayo taas Explorer lama qaban karo (haddaad awoodid), laakiin waxaan hubaa inay tahay inaan ku tiirsanaano barnaamijyada dhinac saddexaad. Muhiimadu waa taas hoomboro Waxaa ku jira iyada oo ku habboon kaliya adoo ku dhejinaya.
Ma jiraan waxyaabo kale oo lagu beddelan karo?
Dabcan. Gudaha GNU / Linux waxaan leenahay Nautilus, Thunar, PCManFM iyo kuwa kale. Laakiin si cadaalad loo muujiyo kuwaan kor ku xusan midkoodna ma lihi awood iyo isku xirnaasho taas hoomboro, maadaama ujeedooyinkoodu gabi ahaanba ka duwan yihiin.
Nautilus qaabkii hore
Waxaan u maleynayaa inay sax tahay in la cadeeyo in mid kasta oo ka mid ah xulashooyinkaan aan dooranay ay ku xiran tahay 100% qof kasta dhadhankiisa, maadaama aynaan dhamaanteen isku adeegsi isku cod aheyn.
Qaar ka mid ah ayaa ka sii qaalisan kuwa kale, oo leh ikhtiyaarro badan ama ka yar, laakiin ugu dambayn, waxaan sameyn karnaa isla sidii lagu sameeyay Explorer o files Windows, iyo sida maqaalkani muujiyey, mararka qaarkood wax badan ayaan qaban karnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ogaanshaha waxyaabaha kale: Dolphin vs Windows Explorer
Taasi haddii ay tahay isbarbardhig, ugu dambeyntii waxa loo baahan yahay si loo ogaado awoodaha isticmaalka Software Free. Ugu dambayntii waad i maqashay iyo inaan sameeyay fikradda ah inaan wax ka sheego uun qoraalladayda, laakiin jirrabku waa mid aad u badan. Taasi waa waxa loo baahan yahay, ma ahan muran ama muran aan ujeeddo lahayn, in la muujiyo waa waxa loo baahan yahay. Adigu waad iska badisay.
Ku jawaab alaintm
Arigato !! 😛 Oo ha bakhaylin, faallo ka bixi inta hartay ee hahaha ...
U soo noqoshada mowduuca, waa hagaag, haa, waxaan isku dayay in aan tusaaleeyo sida ugu macquulsan uguna macquulsan faa iidooyinka iyo qasaaraha uu leeyahay mid kasta, iyo in aan u baahnaa waxyaabo badan oo badan oo aan ku sameeyo magaca Dolphin ..
Hadda waxaan ka fekerayaa waxa codsiyada ah in la tixgeliyo isbarbardhigga soo socda 😀
Maqaal aad u wanaagsan, maahan inaad dhahdo 🙂 a 10 cod ahaan.
Waa maxay waxa fiican qodobka, ma ogi haddii aadan dhigin spacefm maxaa yeelay wuxuu ahaa fargeeto, laakiin way ka fudud tahay kana dhameystiran tahay pcmanfm. Si kastaba ha noqotee maqaalka ugu fiican sidoo kale waa la yaqaan si ka duwan daaqadaha. By the way wax cajiib ah windows windows file browser iyo windows IE waa isla barnaamij waxaadna internetka ka gali kartaa windows windows explorer maadama ay tahay isla sameynta explorer.exe. ku dhowaad sida konqueror oo leh farqiga ah in Konqueror uu wanaagsan yahay oo dhameystiran yahay. Waan kuu xiisay waa faahfaahin yar oo ku saabsan Windows Explorer.
Haddii kale maqaal aad u fiican.
Mahadsanid. Xaqiiqdii, ujeedkeygu maahan inaan xuso dhammaan waxyaabaha kale ee ka jira GNU / Linux (oo ah wax yar), laakiin ma aanan dooneynin inaan iska indhatiro kuwa ugu caansan.
About Explorer, waa run in la dhex gelin karo inta u dhexeysa Maareeyaha Faylka iyo Browser. Marka laga hadlayo Dolphin, haddii aad ku qortid URL barta barxadda, waxay bilaabeysaa biraawsarka ... In kasta oo sidoo kale sida aad sheegtay, aan leenahay Konqueror ..
Maqaal wanaagsan, runtii waan ka helay.
Isbarbardhig aad u fiican, dhab ahaantii ma aanan ogeyn in badhanka kore lagu dari karo, maxaa yeelay marwalba waxaan u adeegsadaa kumbuyuutarka si aan u maro. Xaqiiqdii, waxay ahayd lagama maarmaan in la sheego qodob muhiim ah oo loogu talagalay xoogaa adeegsiga sahamiyaha, terminalka isku dhafan
Thanks southpaw. Kama aanan xusin maxaa yeelay uma maleynayo inay tahay wax uu adeegsade Windows ka xiiseynayo. Mise waa? 😀
Haddii aad 20 sano ka ahaan jirtay maamule keyd, waxaan u malaynayaa sidaas.
Ama ku fashilmay maamulkaas. nidaamyada. XD
iyo tags, laakiin waxaan qabaa inay qayb ka yihiin nepomuk
Maqaal aad u fiican, laba su'aalood, miyaad isticmaaleysaa KDE 4.9 imtixaanka Debian? Iyo sidee loo rakibaa nambarka 9?
Maya, sawirada Dolphin-ka nooca 4.9 waxaa laga soosaaray LiveCD oo ay weheliso Kubuntu. Maxaad uga jeeddaa guddiga # 9? 😕
Mid ka mid ah sawirka seddexaad halka ay ka kooban yihiin qeybaha kala duwan ee loo yaqaan 'Dolphin', ee ku yaal Debian gudigaas kama yimaado qaab ahaan.
Ma aqaano inay mar horeba kaaga jawaabeen walaal, si aad u hesho guddiga oo kaliya riixa F11, ama aad badhanka kontoroolka—> baararka--> macluumaadka 😉
Garan maayo adiga, laakiin waxaan mar labaad ku dhejin doonaa indhashareer indhaha. Waxaan ka helay Dolphin aad u cheesy, PacManFM sidoo kale… dhakhso, soon soon iyo waxqabad, iyo Windows Explorer ayaa iga dhigeysa inaan doonayo inaan dib ugu laabto dhinaca mugdiga. Si ahaan waan u xiisay.
"Corny" !? hahaha, maxaa cawaan ah! Iyo maxay noqon laheyd qeexitaanka "cheesy" kiiskan?
Dolphin-like all KDE- waa plasticine: u qaabee sidaad rabto, ku samee waxa aad rabto xD
Post fiican sidoo kale. Waxaan ilaaway inaan dhaho mahadsanid. Marar dhif ah ayaan helayaa isbarbardhig dhammaystiran, xitaa illaa heerka ku raaxaysiga akhriska.
Ma aanan helin emayl aan kula xiriiro maamulka goobta, waxaan ku sameyn doonaa faallo, waan ka cudurdaaranayaa.
Waxaan rabay inaan ku dhawaaqo in nooca labaad ee Alfa ee Mandriva 2012 lagu bilaabay warar muhiim ah iyo horumarin, laakiin waxaa jira wax gaar ah oo distro-ka lagu bilaabay magaca imtixaanka, Moondrake 2012 alpha 2, maadaama Mandriva SA ay rabto inay ilaaliso sumadeeda alaabteeda ganacsi
Dhamaanteen waan ognahay dhibaatooyinka adag ee gacaliyaheena Mandriva distro, (hada Moondrake) soo maray maantana waxaan ubaahanahay caawinaad, waxaan rabnaa inaan faafino daahfurkaan,
Waxay muhiim noo noqon doontaa inaan saameyn wanaagsan ku yeelano soo saarista noocyada mustaqbalka illaa nooca ugu dambeeya oo xasilloon.
Xorriyad ha noolaato iyo Linux ha noolaato
Xiriirinta ogeysiiska rasmiga ah: http://forum.mandriva.com/en/viewtopic.php?f=35&t=138056
Runtii waan jeclahay Dolphin, gaar ahaan heerkiisa u qaabeynta.
In Explorer, si aad ugu isticmaali karto tabs, codsi dhinac saddexaad ah ayaa loo isticmaalaa waxaan u maleynayaa in loo yaqaan 'Clover', taas oo siinaysa Explorer isku mid ah isku xidhka Chrome: S
Horaad usheegtay, waa barnaamij sadexaad third
Waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalka Elav, isbarbardhiga aad samaysay waa mid weyn! Aniguna waxaan u arkaa fikradda ah "ogaanshaha waxyaabaha kale" mid aad u xiiso badan, oo ah fursad lagu dhiirrigeliyo kuwa shakiga ka qaba inay isbedelka ku sameeyaan Linux, inta kalena suurtagalnimada inaan si fiican u ogaanno barnaamijyada aan maalin walba adeegsanno.
Dhibaatada weyn laakiin weyn ee Dolphin leedahay waa astaamaha ay u keento si iska caadi ah. Haa, waan ogahay inay fududahay in qaar fiican la saaro, laakiin dadaal badan oo kooxda KDE ay ku maal galisay muuqaalka quruxda badan ee Plasma way yara badali karaan astaamaha.
Wax kale, waxaan u arkaa XP Explorer-ka inuu ka sahlan yahay isticmaalka Vista-Seven.
Maqaal aad u wanaagsan, oo aan eex lahayn (waa wax dadka isticmaala Linux ay waxoogaa dhibaato ah ku qabaan dhawaanahan 😉)
Isbarbardhig aad u dhameystiran. Shaashad shaashad ah oo ku dhejisan darbiyada Dolphin ee sadarka, oo lagu diyaariyo tabs, ma xumaan doono. Waxaan ku hayaa «Places» iyo «Folders» dhanka bidix, laba tab (way is dul saaran yihiin, kumana wada noolaanayaan isla safka).
Bikradda gabalkaas !!! waan hanbalyeynayaa 😉
Waan ku raacsanahay Balire, waxaan qaataa Nautilus iyo Thunar (oo ma laha tabs), Dolphin aad buu iigu badan yahay aniga, intaas uma baahni. 🙂
Aad ayaan u fududahay anigoo adeegsanaya biraawsarka feylalka, waxaan aadayaa galka aan doonayo, laba-guji si aan u furo, waan arkaa waxaan doonayay inaan arko, markaan dhameeyo waan xiraa waana iska tagaa. Mar dambe wax intaas ka badan ma isticmaalo 😛
Thanks mahadsanid 😛
Dhanka kale, waxaad seegtay seddex meelood meel dagaalka, Mac Finder Sideed igu qabatay Mac? http://i.imgur.com/aamVe.png
Kaliya waa inaan isbarbar dhigi karin wixii aanan si fiican u tijaabin 😛
Gnome 2.x iyo mac finder waan jeclahay iyaga
Waxaan ku xardhay pc-ga linux oo waxaan ku rakibay daaqadaha 8 nooc tijaabo ah iminkana pc-kaygu wuxuu ku bilaabmayaa 4 ilbiriqsi xitaa ma haysto HD xaalad adag
Qof ugu jawaab
Weyn .. Oo imisa ilbiriqsi ayaad ku qaaddaa virus? Hahaha waa caajis ..
Dolphin si fudud waa wax fantastik ah, waa maamulaha faylka ugufiican madal kasta maanta, way ka awood iyo dabacsantahay:
. Nautilus / Marlin / Faylasha / Nemo
. Micro $ oft Explorer (nooca la yimaada Windows 8 gebi ahaanba waa curyaan yahay oo nuugaya)
. Thunar, PCManFM, qFM iyo asxaabta (si fiican, isbarbardhig suurtagal ma ahan)
. MacOS Mountain Lion Finder - aan la adeegsan karin, aan macquul ahayn oo aan fiicneyn, ayay yiraahdeen dadka isticmaala Apple lafteeda, oo uu ku jiro Daniel Robbins, aasaasaha Gentoo Linux hadana ah aasaasaha iyo soo saaraha ugu weyn ee Funtoo GNU / Linux.
Qofna ma xasuustaa markii ugu horraysay ee ay hopphinku soo baxday dhammaan wixii xumaanta ahaa ee ay ka tuureen xagal kasta oo shabaqa ah? Sida waxa maanta ku dhaca GNOME 3 Shell: haddii ay carrabkooda qaniiyaan waxay u dhintaan sumayn! xD
Hagaag, Mac Finder waa wax la isticmaali karo, wax ku ool ah oo raaxo leh ... waad aragtaa, waxaanan isticmaali jiray Mac sannado badan: - /
Isticmaalayaasha Mac Shaki igagama jiro inay raaxo noqon karto, ka dib oo dhan Mac _ALLY_ way kala duwan tahay
Intayada kale Finder waa claustrophobic: aad uga xaddidan Explorer-ka (oo wax badan sheegaya) oo aan la sheegin Dolphin ...
Xaqiiqdii markii ugu dambeysay ee aan isticmaalo MacOS, waqti yar kahor, Libaax, waxaan xasuustaa in laga helo Raadiyaha inaysan jirin waddo loo maro qaab dhismeedka dhabta ah ee disk (yada), Finder waa lakab guud oo soo koobid ah oo kuu soo bandhigaya adiga faylasha iyo "fayl" qaab jaranjaro ahaan ah laakiin kuma ogolaanayo sinaba inaad ku gasho * dhabta * qaab dhismeedka kaydinta.
Laakiin haye, waxaan u maleynayaa inay shaqadeedii qaban doonto, maahan wax micno darro ah Apple ma u abuureysaa wax soo saar dad aan aqoon u lahayn kombuyuutarrada, iyagoo u sheegaya "maahan inaad taqaanno kumbuyuutaro ama caqli noqo, alaabteennu waxay u shaqeeyaan qof kasta ! "... qof kasta mooyee qof kale ayaa u isticmaali jiray inuu fiiriyo daboolka hoostiisa 😛
Laakiin Dolphin waa KDE. Marka anigu ku rakibi maayo XFCE-kayga. Waxaan ku dhajinayaa CAJA (fargeeto Nautilus ah sidaan u fahmay) waxaanan sugi doonaa Thunarka cusub inuu xasilloonaado oo aan ku laabto midkaas haddii ay u qalanto.
Maqaal aad u fiican. sawirrada, dhammaantood waa kuwo ku habboon oo si cad u caddaynaya waxaad ka hadlayso.
Qoraal aad u wanaagsan. Way cadahay. Shakhsiyan waxaan la joogaa PCmanFM XFCE, thunar ima siinayo ikhtiyaarka aan ku dhaho midig gal guji si aan ugu furo muusikada ama muusiga ama xaalada manga ku furo comix.
Jawaab ku bixi ChristianBPA
Wow, shaqo weyn elav, oo waxaad ka tagtay dhawr waxyaalood oo laga sheego Dolphin.
"Lahaanshaha aragtida galka midaysan iyo cabirkooda" ayaa sidoo kale kajira Dolphin, waa inaad kaliya hagaajisaa bar-tilmaameedka oo aad kudartaa badhanka aad taabato. Sida cabbirka, waxaa jira baarka hoose.
Iyo dhowr talo:
Tabs cusub ayaa lagu furi karaa adigoo riixaya badhanka jiirka dhexe ee saaran rootiga, faahfaahin deg deg ah oo aan ku arkay dad yar oo isticmaalaya.
Weynaanta Dolphin (inkasta oo aanan u isticmaali doonin meel ka baxsan KDE sidoo kale) waa in loo qaabeyn karo si xad dhaaf ah: waxay kuu dhaafi kartaa baare fayl leh kun ikhtiyaar aragtida haddii aad u baahatid iyo ku darista badhamadu waa dariiq lagu bilaabo) ama waxaad ka tagi kartaa isdhexgalka adduunka ugu fudud (kuwa dhaha uma baahna intaas intaas).
Badhanka midig ayaa ku shaqeeya meel kasta. Caja (fargeeto Nautilus ah) ayaa leh.
Thunar sidoo kale, nuqulkeyga wuxuu furayaa daaqad cusub, laakiin waxaan ka shakisanahay in 1.5-ka oo leh tab uu furi doono tab cusub.
Iyo habka Firefox iyo Chrome / Chromium ay sidoo kale sameeyaan, iskuday iskuxir Kaliya taasi waa khiyaano yar oo in yar ay ogyihiin, laakiin taasi waa soo jirtay muddo dheer. Kaliya maaha Dolphin.
Waxaan saxayaa: badhanka XARUNTA.
Sanduuqa / nautilus iyo bisha waxa kale oo aad ku xidhi kartaa tabta badhanka dhexe ¿?
Anigu garan maayo nautilus, laakiin Thunar oo ka mid ah nooca la xaqiijiyay (1.5.1) waa la samayn karaa.
Furan. Waa la furi karaa. Si loo xiro waxaa jira astaan ​​yar 😉
Haa, ninyahow, qof walba wuu ogyahay taas 😉
Weyn, ma aanan ogeyn in Dolphin uu leeyahay badhanka lagu mideynayo aragtiyada ... hadda waan raadinayaa (taasi waxay muujineysaa in mararka qaar xitaa aanan ogeyn kalabar sida ay awoodda GNU / Linux u leedahay) 😀
Waad ku mahadsan tahay tabarucaada MetalByte, hadda xoogaa waan u cadaadin karaa Dolphinkeyga 😀
Kani waa rootiga, waxaad leedahay astaamo badan oo aysan dad badani ka warqabin taasna waxay ka dhigaysaa badhano badan oo guddiga ka mid ah kuwo aan loo baahnayn.
Hagaag aniga majiro wax kafiican Konqueror, waa maamule faylal iyo waxbadan ... inkasta oo aan doorbido Konqueror taxanaha 3.5.x, oo aan ka dhiibto faallan (Konqueror 3.5.9 Debian Lenny)
Waad salaaman tahay, runtii waan jeclaaday qoraalka waxaanan u arkay inay aad u faa'iido badan tahay inaan awood u yeesho badhamada hal dhinac ee daaqadda si aan boos u badbaadiyo 😉
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo sameeyo taas, mahadsanid !!!
Waxa aad "ku kasbatay" dhererka waad lumineysaa ballac ahaan, in kastoo maanta aan u maleynayo in tani xaqiiqdii ay tahay faa'iido maaddaama shaashadaha ay ku jiraan qaab muuqaal halkii sawir laga qaadi lahaa - sida kormeerayaasha qaarkood oo loogu talagalay in loo sameeyo qaabeynta qaabeynta.
Waxay ila tahay aniga in waxa loo yaqaan 'elav' uu adeegsado uu yahay maqaar, horeyba waad u fiirsatay http://www.kde-look.org?
kaliya fur furayaasha oo jiido meel kasta oo aad jeceshahay.
Taasi waa ikhtiyaar ay leedahay Bespin, in la dhigo booska badhannada qaabka Netbook 😀
Maqaal aad u wanaagsan Elav, wixii intaa ka sarreeya waa mid aad u faa'iido badan in la isku dayo in lagu qanciyo dadka guud ahaan inay isku dayaan beddelaadyo iyo halista isticmaalka Linux xitaa in yar si ay u arkaan inay sameyn karaan wax kasta oo ay ku sameeyeen Windows iyo xulashooyin kale oo aan qasab ahayn inay bartaan hab cusub oo loo sameeyo.
Waxaa laga yaabaa inay caado tahay, laakiin runtii waxaa jira barnaamijyo qariib ah (gom player, aimp2, ccleaner, ares, xiriiriye, utorrent, maareeyaha soo dejinta bilaashka ah, winamp casri ah, EAC, aida64, gubida ashampoo) iyaga ka mid ah daaqadaha sahmiyaha (fudud, dheecaan, cinwaan waxtar leh) baarka, fududahay in la isticmaalo iyo aragtida geedka oo waxyar oo shaqeynaya la waayey, tab, laba guddi oo awood leh) (Waan sii kala hayaa feylasha iyo rakibaadda jirooyinka) Waan ogahay kuwa beddelka ah mana heli karo 1 oo runtii igu qanciya gnu Linux. in kasta oo ay tahay wax fudud oo aan aad loo habeyn karin, haddana aniga ayay ii tahay maamule faylka wax ku ool ah.
Ku jawaab techsupp82
Maqaal aad u wanaagsan. Waxa ugufiican, ka shaandhaynta CTRL + i. Murugo wacan waqtiga aad ku keydiso tan oo ku jirta buugyaraha faylalka badan ku jira. Ma doonayo maamule faylal aan lahayn in lagu daro.
Dhanka kale, Xakamaynta, haddii aad gujiso Show koox ahaan, sidoo kale waxay faa'iido weyn u yeelan kartaa faylalka qaarkood, maaddaama kooxaha lagu sameyn karo wax alla wixii aad rabto (taariikhda, cabbirka, nooca, rukhsadaha, milkiilayaasha, iyo haddii aad isticmaasho nepomuks , tags, ratings, comments, hadday tahay cod kooxeed, qaab ... hadday tahay sawir cabbirka sawirka ama hanuuninta ..)
Dolphin waa wax la yaab leh mana jiro faylasi faylaas oo jidka hor istaaga.
Ma doonayo maamule faylal aan lahayn in lagu daro.
Waxaan nahay labo
Hum, qaybta ikhtiyaarrada "adeegga" ee aad muujisay aad ayey uga duwan tahay tan aan haysto [kde 4.9.3] oo ikhtiyaarkaas "enqueue" ma muuqdo, wax kale oo aan jeclahay ayaa ah nidaamkiisa raadinta, oo loo beddelay faylal badan, terminal F4 , horudhac, kala jab F3, feyl qarsoon F8, inkasta oo kuwa dambe aysan ku koobnayn Dolphin. Waxaan u maleynayaa inaadan taaban qeybta NETWORK iyo markii feylasha la maareynayo inta u dhexeysa galka faylasha la dhexgalka "ogeysiisyo iyo shaqo" aan joojin karno, kormeeri karno oo joojin karno howlaha. Sidoo kale animations-ka muuqaalka ee heerkoodu sareeyay kii kde 4.8.0 oo markii dambe dhowr tirtiray sababo la xiriira waxqabadka iyo khaladaadka kombiyuutarada qaar.
Sababtoo ah marka laga hadlayo sawirkaas waxaan kula qaatay Dolphin-ka KDE 4.8 .. 🙂
Isbarbardhig aad u fiican. Ku habboon Windows iyo / ama isticmaalayaasha Mac si ay u arkaan inay isku dayi karaan Linux haddii ay rabaan. Waxyaabaha xun ayaa ah inaanan u malayn in dad badan oo adeegsada Windows ay halkan u yimaadaan inay soo arkaan, laakiin haddii aan dhammaanteen soo bandhigno, waxaa laga yaabaa inaan dadka ku dhiirrigelinno inay ku farxaan ... 🙂
Xeerarka KDE 😀
Isbarbardhig aad u wanaagsan oo aad u faahfaahsan, Hambalyo.
Waxaan u haajiray Linux markii ugu horeysay ee xiisaha iyo xiisaha ka dib, markaa kuma xirna silsiladaha sirta ah, keygenes ama dildilaaca oo ah irrido laga helo "cayayaanka" fara badan oo ku dhaca mashiinkaaga iyagoon is ogeyn, laakiin ... sida wax walba ay jiraan laakiin. .. Weli waxaan ku tiirsanahay M $ maxaa yeelay ma aanan helin maamule soo dejin oo wanaagsan oo ah bedelka IDM iyo MiPony (ha ii sheegin JDownloader oo ah wax karaahiyo leh; iyo KGet oo la gudbin karo) Nokia iyo Motorola Suite (Wamu mana eegno , uma hoggaansamayso) Muuqaalka (Kmail iyo wixii la mid ah mana gaadho anqawyada) marka dhadhankayga; xalinta seddexdan cilladood, waxay noqon laheyd 100% Linux, hada waa inaan labalaabaa markaan ubaahanahay, inta hartay kaliya KDE.
IDM iyo MiPony? Laakiin waa maxay nacasnimada, jooji fucking agagaarka.
Soo dejiyaha ugu fiican ee qaybtaan waa DownThemAll, addon ka ah Firefox: waa laga adkaan karin.
Xitaa iyaga ka wanaagsan ayaa ah wget iyo lftp, laakiin dabcan, waa inaad waqti ku qaadataa akhrinta buuga codsi kasta> :)
Ugu dambeyntiina si aad u adeegsato codsiyada ku jira taleefannadaada - aniga ahaan way urayaan, weligay ma isticmaali karin - waad ku ordi kartaa iyaga oo aan wax dhibaato ah ku dhex qabin mashiin farshaxan ah, oo la mid ah Muuqaalka kaas oo, in kasta oo aan kugu raacsanahay inay wanaagsan tahay PIM maamulaha (keydinta faahfaahinta qaabkeeda foosha xun .OST, runtii waa wax laga naxo inkasta oo ay tahay wax dadka isticmaala aakhirka aan ka warqabin), sinnaba looma beddeli karo, marka lagu daro KMail waxaa jira darsin maamuleyaal waraaqo ah ama PIM ah oo la heli karo, Evolution ka mid ah iyaga, taas oo si fiican u socota.
Waan jeclahay Sanduuqa, Nautilus fargeeto laga bilaabo MATE.